ကောင်းကင်ဖြူ: August 2012
ဟိုး ….. အရပ်ဆီက
လျှပ်ရောင်တွေ ဖြာပါလို့ 
ကဲလိုက်တဲ့ဟန် ……… ။
သြော် …. ဆွေးသူကို
တွေးဆပြန်တော့ ဆွေးစတွေ ဖြာလေတော့
ဆွေဖော် ရယ် မရှိတာကြောင့်
လွမ်းရသူ ကျွမ်းလု နှလုံး
သိနိုင်သူ ရှိပါရော့ ….လား ……. ။
ပျော်ရှာကာ နေလိမ့်မည်လို့ 
မသေခင် ထင်သလောက်မိုက်လေ ရော့
တွေးရှာတဲ့အဆွေကြင်တို့ရယ်
ဒီရင်ကို …… ဝင်ခဲ့ …… ပါလေ … ။
ပြည်တော်အဝေး ငွေအရေးနဲ့ မလွန်သာ
ဆွေးသူမှာ လန်းစေဘို့ 
ပူထုပ်ကို ဟန်လုပ်ကာ ပြုံး
ဘဝင်မှာမောရှာလို့…. ကျွမ်းလုနှလုံး ….. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 12:55 PM 8 comments
စမ်းစိမ့်ပန်းက စိတ်မှာလန်း …… ။
အောင်ပန်းတံခွန် စိတ်မှာလန်း …. ။
တော်ဝင်ပန်းက စိတ်မှာလန်း …. ။
သဒ္ဒါပန်းက စိတ်ဝယ်လန်း …. ။
ယနေ့ ကျရောက်သော ချစ်သူရဲ့ မင်္ဂလာမွေးနေ့မှ သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ချမ်းမြေ့သာယာ ပါစေလို ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ချစ်သူ ရယ် .... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 11:04 AM 8 comments
ဥာဏ်နည်းတဲ့ သူကို “ သားကောင် ” တဲ့
ဥာဏ်များတဲ့ သူက နိုင်ယူတယ်
ကိုယ်အသက်ရှင်မို့ဥာဏ်အားကိုးနဲ့ 
ဒါ … ငြင်းမရတဲ့ သမိုင်း … ။
အချိန်တွေရော ဥာဏ်တွေရော အသုံးပြုပြီ
လွတ်လပ် ရမည် … ။
မျှတ ရမည် …. ။
တရား ရမည် … ။
စာနာ ရမည် … ။
သနား ရမည် … ။
ဒါဟာ သမိုင်းသစ် ရဲ့ မျက်နှာဖုံး …..… ။
အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်မှု့ တွေ …
အရင်းရှင် လက်ကျန် မှုဝါဒ တွေ ….
အဖြူအမဲ ခွဲခြားမှု့ တွေ …
ဆင်းရဲချမ်းသား ခွဲခြားမှု့ တွေ က
“ ဒီမိုကရေစီ ” ရွှေရောင် ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ
အရောင်တွေ မွဲ လို့……. ။
နောက် စာမျက်နှာ ……
ငါ့ ………………. တိုင်းပြည် .........
ငါ့ ………………. ဒေသ ...........
ငါ့ ……………….. လူမျိုး .............
“ ငါ ” ပေါင်းများစွာ အကြောင်းတွေဖွဲ့ 
သူသတ် ငါသတ် တဲ့ လူသတ်ပွဲတွေ နဲ့ 
“ ငြိမ်းချမ်းရေး ” ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ
နေစရာမဲ့ လူအများ ရောင်တွေ မွဲ လို့… ။
လူသတ်လက်နက်တွေ စီးပွားဖြစ်ထုတ် ……….. သတဲ့ …
ဒီမိုကရေစီ လိုင်စင်ရ ပွဲစားကြီးများ ဒီလက်နက်တွေ ကုန်ကူး ….. သတဲ့ …
ပညာမတက်ရင် ရမ်းကား ပါ ….. သတဲ့ …
ပညာတက်များ ရဲ့ “ လူသားချင်းစာနာတောက်ထားရေး ” ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ
သန်းပေါင်းများစွာသော လူအများ ဆာလောင်ငတ်မွတ် ရင်း
ငြင်းမရတဲ့ လူ့ သမိုင်း ကို ဖုံးကွယ်လျက်
သမိုင်းသစ်ကို ရေးကြတော့ ၏ .... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 12:05 AM2comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:21 AM7comments